GUITAR TUNING SOFTWARE - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2019
Na kọmputa nke ọtụtụ mmadụ nwere ohere anụ ahụ, ndekọ pụrụ iche nwere ike ịchekwa ozi nzuzo ma ọ bụ ihe ọmụma nke onye ọrụ. N'okwu a, iji nweta data dị n'ebe ahụ ka a ghara ikwupụta ma ọ bụ gbanwee site na ndudue, ọ bụ ihe ezi uche dị na iche echiche banyere esi egbochie ịnweta nchekwa a na ndị ọzọ. Ụzọ kachasị mfe ime nke a bụ ịtọ paswọọdụ. Ka anyị chọpụta otú ị nwere ike isi tinye paswọọdụ na ndekọ na Windows 7.
Hụkwa: Otu esi zoo faịlụ ma ọ bụ nchekwa na PC na Windows 7
Ụzọ iji debe paswọọdụ
Ị nwere ike paswọọdụ-chebe ndekọ ahụ na sistemụ arụmọrụ akọwapụtara ma site n'enyemaka nke ngwanrọ pụrụ iche maka ịkwanye paswọọdụ, ma ọ bụ iji ngwa nchekwa. O di nwute, enwereghi ego nke enyere iji weta okwuntughe na ndekọ nke Windows 7. Ma, n'otu oge ahụ, enwere nhọrọ nke ị nwere ike ime n'enweghị ngwanrọ nke atọ iji dozie nsogbu ahụ. Ma ugbu a, anyị ga-akwụsị na ụzọ ndị a n'ụzọ zuru ezu karị.
Nzọụkwụ 1: Nchekwa Anvide Seal
Otu n'ime mmemme kachasị mfe maka ịtọọ paswọọdụ na ndekọ bụ Anvide Seal Folder.
Download Anvide Seal Folder
Gbaa ngwa nbudata nchekwa Anvide Seal. Nke mbụ, ịkwesịrị ịhọrọ asụsụ ịchọrọ. Dịka iwu, onye nhazi ahụ na-ahọpụta ya dịka ntọala nke sistemụ arụmọrụ, wee pịa ebe a. "OK".
Mgbe ahụ, shea meghere Wizards Wụnye. Pịa "Na-esote".
A malitere shea, ebe ịkwesịrị ịkwado nkwekọrịta gị na nkwekọrịta ikike ikike onye nrụpụta ugbu a. Tinye bọtịnụ redio na ọnọdụ "Ana m anabata okwu nke nkwekọrịta ahụ". Pịa "Na-esote".
Na windo ọhụrụ ị ga-ahọrọ ndekọ ndekọ nwụnye. Anyị na-akwado ka ị ghara ịgbanwe mpaghara a, ya bụ, iji tinye na nchekwa nchekwa usoro ihe omume. Pịa "Na-esote".
Na windo na-esote, ịmepụta ihe okike nke akara ngosi na "Desktọpụ". Ọ bụrụ na ịchọrọ ile ya na mpaghara a, wee pịa "Na-esote". Ọ bụrụ na ịchọrọghị akara a, buru ụzọ chọpụta ihe ahụ "Mepụta akara ngosi na desktọọpụ", wee pịa bọtịnụ a kapịrị ọnụ.
A na-arụ usoro nhazi nke ngwa ahụ, nke na-ewe obere oge site n'aka gị.
Na windo ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ozugbo ịme ka ngwa ahụ dị, hapụ ihe ngosi na-esote ihe ahụ "Na-agbanye nchekwa nchekwa Anvide". Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta mgbe e mesịrị, hichapụ igbe a. Pịa "Zuru ezu".
Mgbe ụfọdụ, ị na-agba ọsọ n'elu "Wizard Wụnye" ada ada na njehie. Nke a bụ eziokwu na faịlụ ahụ ga-arụ ọrụ ga-ejikwa ikike nhazi. Enwere ike ime nke a naanị site na ịpị ụzọ nhie ya "Desktọpụ".
Window maka ịhọrọ asụsụ asụsụ mmemme ga-emepe. Pịa ọkọlọtọ mba ahụ site na nhọrọ ndị a na-enye, asụsụ nke ịchọrọ iji mgbe ị na-arụ ọrụ ahụ, wee pịa akara akara akwụkwọ ndụ akwụkwọ dị n'okpuru.
Akara nke nkwekọrịta ikike maka iji usoro ahụ emepe. Ọ ga-abụ na asụsụ a họọrọ. Lelee ya ma ọ bụrụ na ị kwenyere, pịa kwenye.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ngwa ngwa Anvide Seal Folder n'onwe ya. Nke mbụ, ịkwesịrị ịtọọ paswọọdụ ịbanye ngwa ahụ. A ghaghị ime nke a iji gbochie onye ọpụpụ ịbanye na mmemme ahụ ma gbochie ya. Ya mere pịa na akara ngosi ahụ "Paswọdu ịbanye usoro ihe omume ahụ". Ọ dị n'akụkụ aka ekpe nke toolbar ma nwee ọdịdị nke mkpọchi.
Mpempe window ga-emepe, n'ọhịa naanị ị chọrọ ịbanye paswọọdụ chọrọ wee pịa "OK". Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga - achọ ka ị banye na igodo igodo Anvide.
Ịlaghachi na windo ngwa ngwa iji gbakwunye ndekọ nke kwesịrị iji paswọọdụ chebe, pịa akara ngosi n'ụdị ihe ịrịba ama "+" n'okpuru aha "Tinye nchekwa" na toolbar.
Nhọrọ windo ndekọ ga-emepe. N'ịga na ya, họrọ ndekọ nke ịchọrọ ịtọ paswọọdụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa akara akara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ala nke windo ahụ.
A na-egosipụta adreesị nke nchekwa ahụ ahọrọ na windo Anvide Lock Folder window. Iji debe paswọọdụ maka ya, họrọ ihe a ma pịa akara ngosi ahụ "Nweta ohere". O nwere ụdị akara ngosi n'ụdị mkpọchi mechiri emechi na toolbar.
A windo meghere ebe n'ime ubi abụọ ị ga-eji tinye paswọọdụ ugboro abụọ ị ga-eweta na nchịkọta ahọrọ. Mgbe ịmechara ọrụ a, pịa "Nweta ohere".
Ọzọ, igbe na-emepe mepee ka a ga-ajụ gị ma ị ga-edezi akara ngosi paswọọdụ. Ịtọ ncheta ga-enye gị ohere icheta koodu koodu ma ọ bụrụ na ịchefu ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye ntughari, pịa "Ee".
Na windo ohuru tinye ntughari na pịa "OK".
Mgbe nke ahụ gasịrị, nchekwa ahụ a họọrọ ga-abụ nchedo paswọọdụ, dị ka ihe àmà na-egosi na ọnụnọ nke akara ngosi dị n'ụdị mkpọchi mechiri emechi na aka ekpe nke adreesị ya na interface Anvide Lock Folder interface.
Iji tinye ndekọ ahụ, ịkwesịrị ịhọrọ aha ndekọ aha na usoro ahụ ma pịa bọtịnụ ahụ "Ekekọrịta" dị ka mpempe akwa na-emeghe na toolbar. Mgbe nke ahụ gasị, windo ga-emeghe ebe i kwesịrị itinye ederede nkwupụta mbụ.
Usoro 2: WinRAR
Nhọrọ ọzọ iji paswọọdụ-chebe ọdịnaya nke folda ahụ bụ idebe ma weta paswọọdụ na Archive. Enwere ike ime nke a site na iji WinRAR archiver.
Gbaa WinRAR. Iji onye njikwa faili ahụ wuru, jigharịa na ndekọ nke nchekwa ahụ ị na-aga paswọọdụ chebe. Họrọ ihe a. Pịa bọtịnụ ahụ "Tinye" na toolbar.
Mmiri windo ihe nchekwa ahụ meghere. Pịa ya na bọtịnụ ahụ "Tinye paswọọdụ ...".
Okwuntughe paswọọdụ na-emepe. Na mpaghara abụọ nke windo a, ịkwesịrị ịbanye n'otu okwu ahụ, nke ị ga-emepe folda ahụ etinye na nchekwa na-echekwa paswọọdụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ndekọ ahụ ọzọ, lelee igbe dị n'akụkụ "Debanye aha faịlụ". Pịa "OK".
Gaa na windo ntọala ndabere, pịa "OK".
Mgbe a kwụsịrị ndabere ahụ, a na-etolite faịlụ na RAR ndọtị, ị ga-ehichapụ folda mbụ ahụ. Họrọ nchịkọta a kapịrị ọnụ ma pịa bọtịnụ ahụ. "Hichapụ" na toolbar.
A na igbe mepee nke ịchọrọ ikwenye na ebumnuche ịhichapụ nchekwa ahụ site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Ee". A ga-akwaga ndekọ ahụ "Ịzụ". Iji hụ na nzuzo zuru ezu, jide n'aka na ị ga-ehicha ya.
Ugbu a, iji meghee ebe nchekwa nchekwa-echekwa, ebe nchekwa data dị, ịkwesịrị igodo bọtịnụ akaekpo-pịa ya ugboro abụọ (ya bụ,Paintwork). Ụdị ntinye paswọọdụ ga-emeghe, ebe ị ga-etinye okwu isi na pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Usoro 3: Mepụta faịlụ BAT
I nwekwara ike paswọọdụ-chebe nchekwa na Windows 7 na-enweghị mmemme ọ bụla ọzọ. Enwere ike ịrụ ọrụ a site na ịmepụta faịlụ na bọtịnụ BAT na ọkọlọtọ Notepad nke sistemụ arụmọrụ a kapịrị ọnụ.
Nke mbụ, ịkwesịrị ịmalite Notepad. Pịa bọtịnụ ahụ "Malite". Ọzọ, họrọ "Mmemme niile".
Gaa na nchekwa "Ụdị".
Ndepụta nke mmemme na ọrụ dị iche iche. Họrọ aha Notepad.
Ntughari na-agba ọsọ. Hichaa koodu na-esote n'ime windo maka ngwa a:
aha nchekwa nchekwa
ma ọ bụrụ na "Nzuzo" EXIST goto DOSTUP
ma ọ bụrụ na ọ BỤGHỊ AKWỤKWU Papka goto RASOKOK
ren Papka "Nzuzo"
àgwà + h + s "Nzuzo"
Echichapụkwa mkpọchi ahụ
Nweta ozi nzuzo, chtoby otcryt katalọgụ
ma ọ bụrụ na NOT% gafere% == secretnyj-cod goto PAROL
attrib -h -s "Nzuzo"
weghachi nkesa Catalog webshno otkryt
nyochaa na nzuzo
weghachiri nkesa Catalog aha
Kama ikwu okwu "codnyj-cod" Tinye ederede okwu a ga-etinye na folda nzuzo. Ọ dị mkpa ịghara iji oghere mgbe ị banyere ya.
Ọzọ, pịa na Notepad na ihe "Njikwa" ma pịa "Zọpụta Dị ka ...".
A na-azọpụta windo mepee. Gaa na ndekọ ebe ịchọrọ ịmepụta nchekwa nchekwa echekwara. N'ọhịa "Ụdị Njikwa" kama nhọrọ "Faịlụ ederede" họrọ "Faịlụ niile". N'ọhịa "Ngbanwe" họrọ site na ndepụta ndepụta "ANSI". N'ọhịa "Filename" tinye aha ọ bụla. Isi ọnọdụ bụ na ọ na - ejedebe na ntinye ọzọ - ".bat". Pịa "Chekwa".
Ugbu a na enyemaka "Explorer" Gaa na ntughari ebe ị tinyere faịlụ na mgbati BAT. Pịa ya Paintwork.
N'otu ndekọ ahụ ebe faịlụ dị, ndekọ a na-akpọ "Papka". Pịa ihe BAT ọzọ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a gbanwere aha nke nchekwa mbụ ahụ "Nzuzo" na mgbe sekọnd ole na ole ọ na-apụ na-akpaghị aka. Pịa ọzọ na faịlụ ahụ.
A na-emepe njikwa na nke ị nwere ike ịhụ ntinye: "Ahịa zoro ezo, chtoby otcryt catalog". N'ebe a, ị ga-etinye ederede koodu nke ị dekọrọ na faịlụ BAT. Wee pịa Tinye.
Ọ bụrụ na i tinye paswọọdụ ezighi ezi, njikwa ahụ ga-emechi ma malitegharịa ya ị ga-achọ pịa bọtịnụ BAT ọzọ. Ọ bụrụ na etinyere koodu ahụ n'ụzọ ziri ezi, a ga-egosipụta ọkwa ahụ ọzọ.
Ugbu a detuo ọdịnaya ma ọ bụ ozi ịchọrọ ichebe na ndekọ a, n'ezie, emesia wepu ya site na ebe mbụ ya. Wee zoo nchekwa ahụ site na ịpị faịlụ BAT. Otu esi gosiputa katalọgụ ọzọ ka ị nweta ozi echekwara ebe ahụ ka a kọwapụtara n'elu.
Dị ka ị nwere ike ịhụ, enwere oke ndepụta nke ohere iji paswọọdụ-chebe folda na Windows 7. Iji mee nke a, ị nwere ike iji ọtụtụ mmemme ezubere maka nzube ndị a, jiri nchekwa nchekwa ma ọ bụ mepụta faịlụ BAT na koodu kwesịrị ekwesị.